Castles နှင့် ပတ်သတ်သောရှာဖွေမှုရလဒ်ZEKKEI Japan(1/4)
Historic castles are located in many areas in Japan. Loved and relied on by the people since ancient times, these castles are frequently the symbols of their towns and are now enjoyingarenaissance as popular sightseeing destinations. Castles where the tower keep is still intact are particularly worthavisit.
ခန်းမွန်းပင်လယ်ရေလက်ကြားတွင် မျက်နှာမူနေသော ဒီခိုခရာနေရာသည် မူလက ကုန်းတွင်းပင်လယ်သွားလာရေးအတွက် လိုအပ်ခဲ့သောကြောင့် မြေကြီးကို ဝန်းရံကာ အ...
နိရှိဂိမြစ်မှာ ချိတ်ဆက်နေတဲ့ လှပတဲ့ ငါးဆင့် ပေါင်းကူးပုံစံက ထူးခြားမှုဖြစ်ပြီး ဂျပန်နာမည်ကြီးတံတား ၃ခု၊ ဂျပန်ဆန်းပြားတဲ့တံတား ၃ ခုမှာ ရေတ...
အဲဒိုခေတ်မှာ တိုခုဂါဝအစိုးရက ကျိုတိုရဲ့ အခြေခံပြုလုပ်ထားတဲ့ ရဲတိုက်ဖြစ်ပြီး ရဲတိုင်ဟောင်းနေရာတစ်ခုလုံးကို သမိုင်းဝင်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတ...
တခဲဂရဲတိုက်နေရာသည် ဂရာမရှိရောအမွေအနှစ်အဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တကယ့်ကိုပြီးပြည့်စုံသောအနေအထားအဖြစ်ကျန်ရှိနေပြီး ကျားကလဲလျောင်းနေသလိုမျိုး...
၁၅၉၃ မှ ၁၅၉၄ ခုနှစ်အတွင်းတွင် တည်ဆောက်ထားသော ဘုံငါးဆင့် ခြောက်ထပ်ပေါင်းစပ်ထားသော ပြသဒ်ပါသောရဲတိုက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ၏အဖိုးတန်ရတနာအဖြစ် သတ်မ...
ဂျပန်နိုင်ငံနံပါတ်တစ် အလှဆုံးရဲတိုက်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ၁၈၇၁ ခုနှစ်မှာ ဟိုင်းအိဟန်ချိခရိုင်နဲ့ အတူ ရဲတိုက်ဖြစ်လာပြီး ကျောက်နံရံတွေ မှ အပ အာ...
၁၆၀၀ ခုနှစ်တွင် ဆဲခိဂန်းဟရာ၏တိုက်ခိုက်မှုတွင် အောင်မြင်ခဲံသော ခုရောဒချောဖု၏ ပေးအပ်ထားသော ချိခုဇန်န်းခုနိတွင် ဆောက်လုပ်ထားသော ထင်ရှားသောရဲ...